Valisoa ve ny marketing azo andraisana andraikitra? | Martech Zone
Talata, May 29, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taona maro lasa izay, Seth Godin nanoratra ilay fehezan-teny malaza Fivarotana fahazoan-dàlana ary nanoratra boky mahafinaritra momba izany. Manana kopia autographeo izay tiako sy novidiako ny boky rehetra nanomboka teo. Ny marketing amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana dia mahafinaritra satria ny mpanjifanao dia nanome alalana anao hivarotra amin'izy ireo - fifanarahana tsara.
Vao naka aho Toe-karena lalina: Haren'ny fiarahamonina sy ny ho avy maharitra by Bill McKibben tamin'ny baikon'ny namana akaiky Pat Coyle. Namaky ny toko voalohany aho ary voafandrika. Ny boky dia mitodika mankany amin'ny lafiny 'Vonjeo ny tany' amin'ny orinasa fa manome fomba fijery hafa momba azy izay tiako.
Tsy karazana olona 'maintso noho ny meloka' aho. Tena olona mino ny kapitalisma sy ny fahalalahana aho. Raha te-handeha fiara mitondra SUV mandoro lasantsy taonina ianao dia izany no zonao. Raha te-ho tompon'andraikitra ianao ary manimba izao tontolo izao dia mandehana manandrama. Mazava ho azy fa mino ny fifandanjan-kery sy ny demokrasia koa aho mba hanandramana hisakana anao. Ny tena zava-dehibe dia mino ny fampamoahana ny tenako manokana aho amin'ny zavatra ataon'ny tena… izay mitondra ahy amin'ny varotra tompon'andraikitra.
Eto Indiana dia hanome trano indramina amin'izy ireo izy ireo. Na dia takatry ny saina aza ny trano, dia i Indiana no iray amin'ireo taham-pananana mitombo haingana indrindra ao amin'ny firenena. Aiza ny fandraisana andraikitra ho an'ireo olona mivarotra ireo trano ireo amin'ny olona fantany fa tsy zakan'izy ireo? Raha misy dokotera nanendry mpamono fanaintainana mpidoroka, dia vonona izahay ny handefa azy ireo any am-ponja. Saingy ny mpivarotra tsy tompon'andraikitra izay mivarotra vokatra na serivisy amin'ireo olona tsy mila azy ireo dia tsy vonoina ao ambadika fotsiny, omena valisoa ara-bola izy ireo. Amidio bebe kokoa amin'ny maro… izany no teny filamatra mitondra fiara!
Hiverina kely ao amin'ny fanamarihako momba ny fandraisana andraikitra avy amiko manokana aho… Mino aho fa tompon'andraikitra amin'ny hetsika nataontsika manokana isika. Heveriko ihany koa fa mila mampihatra tsindry ho an'izay manandrana manodikodina na mampiasa izay ilain'ny olona isika. Tokony hanjaka ny marketing tompon'andraikitra. Ny varotra tompon'andraikitra dia midika hoe fivarotana vokatra na serivisy fantatrao fa mila olona iray mila azy io. Ireo mpivarotra manana andraikitra dia tian'ny mpanjifa manararaotra fotoana na vola…. tsy namidy zavatra ho azy ireo fotsiny mba hivarotana azy.
Ao anatin'ny toko voalohany amin'ny Deep Economy, manohitra ny fiheverana ny hoe "more is better" - kolotsaina atosiky ny governemanta sy ny mpivarotra. Ampirisihina hatrany ianao hividy ny kilalao vaovao, ny fiara vaovao, ny trano vaovao… handany, handany, handany ary ho sambatra kokoa ianao. Saingy tsy faly kokoa izahay. Tsy hiresaka an-tsipiriany momba an'io aho - an'izay rehetra ao amiko Manifesto fahasambarana. Manantena fotsiny aho rehefa mamaky ilay boky fa tsy hiantsoantso hoe 'maintso' fa manosika ireo fiarahamonina minimalista izay tompon'andraikitra amin'ny tenany manokana.
Atsaharo ny fivarotana bebe kokoa amin'ny hafa. Amidio bebe kokoa amin'ny fikarohana ireo olona fantatrao fa mila an'io! Raha toa ny tanjon'ny fahazoana anao dia ny hampiala haingana ny fihazonana anao, mety tsy hivarotra ny entanao amin'ny vahoaka marina ianao - na angamba tsy manana vokatra na serivisy tsara hanombohana anao.
Tags: Bill McKibbentoekarena lalinapat coyle
May 30, 2007 amin'ny 8: 13 AM
Ny eritreritro hatrizay dia hoe tsy tena mivarotra ianao, manome serivisy ho an'ny olona mila izany ianao. Na lehibe na kely na firy na firy, dia hahomby hatrany amin'ny farany (tsy ny fotoana fohy) raha mitadidy ny tsy "hivarotra", fa "manompo". Raha tsy hoe, mazava ho azy, ny anaranao dia RonCo ary manana karazan-kevitra momba ny gazety tongolo lay / tongolo / butwaitthere'smore ianao, dia hahita fahombiazana amin'ireo olona toa ahy izay tia gadget ary tsy afaka matory noho izany. mividy zavatra tsy ilainy. Mba hanompoana, izany tokoa no adidintsika eto an-tany, sa tsy izany?
May 30, 2007 ao amin'ny 9: 03 PM
Tsara hoy i Jules. Heveriko fa ny adidintsika dia tokony hanompo. Mbola miezaka ihany aho mamantatra hoe iza no hotompoina ary inona no hotompoina amin'izy ireo.